25 Talaabooyin Guul: Mashiinka Raadinta iyo Haysashada Ganacsi | Martech Zone
Monday, August 17, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Diyaarinta blog Indiana, iyo iyadoo la kaashanayo Bryan Povlinski, waxaan bilaabay eBook ka kooban 75 bog oo leh talooyin badan, talooyin, tabaha iyo sirta ku saabsan hagaajinta mashiinka raadinta iyo ganacsiga ganacsiga.
Waxaan ku bixinay in ka badan 100 nuqul Blog Indiana iyo jawaab celinta waxay ahayd mid cajiib ah. Runtii waan ku faraxsanahay dhammaan taageerada!
Tan iyo markii uu kani yahay eBookkeygii ugu horreeyay, waxaan talo ka helayay qaar ka mid ah qorayaasha wax qora ee internetka wax ka qora. Talada ugu horreysa ee aan helay waxay ahayd inaan si weyn hoos ugu dhigo qiimaha (min $ 99) muddo xaddidan. Tani waxay u adeegtaa laba ujeedo… waxay buugaagta elektaroonigga ah ku soo saartaa wareegga iyada oo ka dhigaysa mid aad uga jaban iyo waxay abuurtaa xoogaa guux ah oo ku wareegsan buugga.
Soo Deg Shaxda Tusmada waxaadna arki doontaa sida buugani u yahay mid dhammaystiran. Waxaan ku sii hayn doonaa qiimaha $ 9.99 in yar - illaa nuqulo igu filan lagala soo baxo oo aan bilaabo inaan arko xoogaa buuq ah. Marka bilaw buzzin!
Aug 18, 2009 at 9: 09 AM
Ugu Fiican Nasiibka Douglas Adiga ebook cusub,
Agoosto 19, 2009 saacaddu markay ahayd 5:14 PM
Nasiib ayaan u helay inaan helo nuqul ka mid ah ebookgan Blog Indiana iyo WOW. Waa qiimo ka badan $ 9.99! Runtii waxaa kujira waxyaabo badan oo ku saabsan SEO. Xitaa wali nuskam ma dhamaynin buugga waxaanan horey u go'aansaday inaan daabaco oo aan u haysto tixraac miis Ma niyad jabi doontid! Shaqo fiican Doug & Bryan!
Agoosto 24, 2009 saacaddu markay ahayd 5:01 PM
Cajiib, Doug! Waxaan rajeynayaa inay si weyn u iibiso!